We Fight We Win. -- " More than Media ": ရန်ကုန်မြို့ တွင်လျှပ်စစ်မီးပုံမှန် ၂၄ နာရီရရှိရေး လူထုမှငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြစဉ်။မေလ ၂၂ ရက်၊၂၀၁၂
ရန်ကုန်မြို့ တွင်လျှပ်စစ်မီးပုံမှန် ၂၄ နာရီရရှိရေး လူထုမှငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်နေကြစဉ်။မေလ ၂၂ ရက်၊၂၀၁၂
၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးအတွက် ပြည်သူလူထုပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ခန့်က ဖယောင်းတိုင်များ ကိုင်စွဲလျက် ဆူးလေဘုရားပေါ်တက် ဆုတောင်းခဲ့ကြပြီး ဘုရားရင်ပြင်တွင် လက်ဝဲရစ်တပတ်ရစ်ကာတောင်းဆိုခဲ့ကြကြောင်း မြစ်မခ သတင်းထောက် ထွန်းနေအောင်၊ စောဇင်ညီနှင့် ကောင်းမြတ်ဖြိုးတို့မှ သတင်းပေးပို့သည်။ ဗီဒီယို- ထွန်းနေအောင်(မြစ်မခ)
All the time we keep saying the following.
The living standard of the country is going down deeper and deeper with great acceleration and momentum due to the IMPACT OF 50 YEARS MISTAKES OF WRONG POLITICAL SYSTEM and WRONG ECONOMIC SYSTEM SET UP BY JUNTA,NE WIN and FOLLOWED UP BY HIS NEW GENERATION OF MILITARY GANGSTERS.
BUT THE GANGSTERS BECOME
-Richer and richer
-Healthier and Healthier
-Live longer and longer
FIGHT TO TRANSFORM the GANGSTER'S PROPERTY as A PUBLIC PROPERTY !
ပြည်တွင်းမှာလျှပ်စစ်တွေ ပိုလျှံနေလို့ ပြည်ပကိုရောင်းစားရမည်လို့ြေ့ပာတဲ့ လျှပ်စစ်ဝန် ကြီး ဦးဇော်မင်းကို နိုင်ငံတော်ခုံရုံးကိုတင်သင့်ပါသည်...
ဒီဟာတွေအားလုံး၏ စတင်ခြင်းသည် သူ၏စကားတစ် ခွန်းကြောင့် ပြည်သူတွေစခဲ့ကြရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်..
မီးလာဖို့တောင်းဆိုနေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အပြစ် မဟုတ်ပါ..တရားခံအစစ်ကတော့ လျှပ်စစ်ဝန် ကြီး ဦးဇော်မင်းသာလျှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်...
ဂုဏ်သရေရှိသော ဦးသိန်းစိန်၏ အစိုးရအနေဖြင့် သူတို့ခန့်အပ်ထားခဲ့သော သူတို့ဝန်ကြီးကို အရေး ယူ..ခုံရုံးတင်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်..အကယ်လို့ မလုပ် ဆောင်ခဲ့ပါလျှင်လည်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ တာဝန် သာဖြစ်ပါလိမ့်မည်..
22 May 2012 at 23:11